Pogba Oo Ugu Danbeyntii La Sheegay In Oo Ka Tagi Doono Kooxda Man United Kuna Wajahan Kooxda...
HomeWararka Ciyaaraha MaantaPogba oo ugu danbeyntii la sheegay in oo ka tagi doono kooxda Man United kuna wajahan kooxda…
Pogba oo ugu danbeyntii la sheegay in oo ka tagi doono kooxda Man United kuna wajahan kooxda…
December 8, 2020 Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Paul Pogba ayaa la sheegay inuu ka tagayo kooxda Man United.
“Waxaan dhihi karaa way dhamaatay mustaqbalkii udhaxeysa Pogba iyo Manchester United,” ayuu yiri wakiilka Faransiiska Mino Raiola, sida laga soo xigtay Fabrizio Romano.
Xiddiga khadka dhexe ee reer France ayaa yimid kooxda Man United sanadkii 2016 isaga oo ka yimid kooxda Juventus ka dibna waxa ku baxday lacag dhan €105.00m.
Wixii intaa ka dambeeyay wax hormar la taaban karo kuma soo kordhin kooxda Man United, waxa aad uga niyad jabay Taageerayaasha iyo maamulka kooxda kadib tayo xumo oo soo bandhigay laacibka asagoo doonaaya in oo ka tago Man United.
Paul Pogba ayaa horay loogu xamanayay inuu ka tagayo kooxda Manchester United. Kooxdiisii ​​hore ee Juventus ayaa la sheegay inay xiiseyneyso 28 jirkaan. Intaas waxaa sii dheer, isaga qudhiisa ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu u ciyaaro Real Madrid maalin maalmaha ka mid ah markii uu aad ula dhacsanaa tababare Zinedine Zidane.
– Dhamaan ciyaartoyda kubada cagta waxay ku riyoodaan inay u ciyaaraan Real Madrid. Riyo ayey ii tahay aniga, maxaa diidaya in maalin uun dhacdo?, Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa horay u yiri.
Waxay umuuqataa inay marayso waqtigii ugu danbeeyey oo dhihi lahaay macsalaamo,
Wakiilka 28 jirkaan Mino Raiola ayaa sidoo kale dhowr jeer hadlay wuxuuna tilmaamay in halista Pogba ee ka tagista Manchester United ay tahay dhib weyn ay soo wajihi doona kooxda reer England.
Hadda waxay umuuqataa inay cadahay inuu ka tagayo kooxda ka ciyaarta Premier League:
“Waxaan dhihi karaa waayihii Pogba iyo Manchester United waa soo dhamaaday,” ayuu yiri wakiilka Faransiiska Mino Raiola, sida uu sheegayo saxafiga suuqa kala iibsiga ee Fabrizio Romano.